Gaalkacyo oo laga daad-gureynayo dadkii laga soo musaafuriyay Laascaanood | Dhacdo
Home Wararka Maanta Gaalkacyo oo laga daad-gureynayo dadkii laga soo musaafuriyay Laascaanood
Gaalkacyo oo laga daad-gureynayo dadkii laga soo musaafuriyay Laascaanood
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta Magaalada Gaalkacyo ka bilaabay in uu ka daad-gureeyo qoysaska dadkii toddobaadkii hore laga soo musaafuriyay Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool.
78 qof oo ka kooban 21 qoys ayaa maanta diyaarad looga qaaday Garoonka Diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Magaalada Gaalkacyo, iyagoona ku sii jeeda Magaalada Baydhabo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hoggaaminayo, oo tan iyo Jimcihii shalay ku sugan magaaladaasi ayaa sheegay in daad-gureynta lagu bilaabay dadka nugul, sida hooyooyinka, carruurta iyo dadka da’da.
Maxamed Abuukar Cabdi, Wasiirka Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dadka la daad-gureynayo guryo iyo wixii ay cunni lahaayeenba loogu sii diyaariyay Magaalada Baydhabo.
Wasiirka ayaa sheegay in dadka qaarkood ay go’aansadeen inay sii deganaayeen Magaalada Gaalkacyo, halka qaar kalena ay u sii gudbeen dhinaca Magaalada Garoowe, maadaama ay ganacsato yihiin, sida uu yiri.
Wasiirka ayaa dadka reer Gaalkacyo kaga mahadceliay soo dhaweynta ay dadkaasi u sameeyeen, isagoo xusay in xaaladda dadkaasi ay aad uga wanaagsan tahay, maalintii laga soo musaafurinayay Xarunta Gobolka Sool ee Laascaanood.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maalmo ka hor guddi u magacaabay dadka laga soo musaafuriyay Magaalada Laascaanood.
Previous articleSarkaal ka soo baxsaday Shabaab oo isu soo dhiibay CXD (SAWIRRO)
Next articleRW Rooble oo warbixin ka dhageystay Guddiyada Doorashooyinka